KMF/Cnoe: “Misy famitahan’ny mpanao politika ny mpifidy” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Misy famitahan’ny mpanao politika ny mpifidy”
“Ny endrika famitahana mpifidy ataon’ny mpirotsa-kofidina, miseho amin’ny hoe: olona iray ihany no eo amin’ny peta-drindrina; matetika, ny loha lisitra. Tena ataoko hoe fitaka tsotra izao izany.”
Io ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fisian’ny famitahan’ny ankamaroan’ny kandidà ny mpifidy amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao.
Tokony ho hita ao anatin’ny peta-drindrina avokoa ny mpiray lisitra iray manontolo. Tokony ho hita koa izany amin’ny fampahafantarana ny momba ireo kandidà, amin’ny fitetezam-paritra sy ny fampielezan-kevitra rehetra atao.
Na avy amin’ny antoko politika inona na inona io, na avy amin’ny hoe tsy miankina: samy manao izay fitapitaka izay avokoa, araka ny nambarany.
Mila mailo ny mpifidy
“Rehefa tsy vitantsika ny manarina ireo mirotsa-kofidina, tokony ho mailo ny mpifidy”, hoy izy. Izay no anaovan’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena antso hoe: mila mailo ny mpifidy tsy ho voafitaka amin’ny endri-javatra toy izany. Azo aderadera be amin’ny peta-drindrina ny sarin’olona iray na roa, fa farafahakeliny telo ny olona iray lisitra amin’ny fifidianana. Satria iray tompon-toerana; ny roa, mpisolo toerana. Efatra izany amin’ny fari-pifidianana sasany.
Anjaran’ny mpirotsa-kofidina sy ny mpifidy ny mifanabe ao anatin’izay: raha tiana ny hahatsara zavatra, tokony ho hita avokoa izay olona iray lisitra amin’ny fifidianana. Endrika famitahana mpifidy ataon’ny mpanao politika koa ny milaza hoe tsy miankina ny sasany, fa miankina avokoa ihany, araka ny fanazavany.